Kristoffer Kolombus - Wikipedia
Kristoffer Kolombus wuxuu ahaa nin Talyaani ah, wuxuu noolaa sanadihii 1451 ilaa 1506. Kristoffer wuxuu ahaa badmaaxiye ah oo aad u safri jiray, wuxuu raadin jiray dhulalka ama qaaradaha. Kristoffer wuxuu ahaa ninka helay qaarada Ameerika sanadka marka oo ahaa 1492. Kristoffer wuxuu ku dhashtay magaalo ku taalo waqooyiga talyaaniga oo la dhoho Genova, wuxuu badda ku safri jiray asigoo da' yar. Aabihiis waxaa ladhaa Domoniko Kolumbus, hooyadiis neh Susana Fontanarosa.
Sawir la sameeyey markii uu dhintay kadib Sebastiano del Piombo, 1519. wax sawir sax ah lagama hayo.
Admiral Badaha; Wakiil Boqor ahna Gudoomiyeha Hindida amerika
31 Oktoobar 1451
Genova, Jamhuuriyada Jenofa, ee hadda ka mid ah Itaaliya
20 Maajo 1506 (aged c. 54)
Valladolid, Crown of Castile, ee ka mid ah Isbayn
Ka hawl gala
1 Dhulka oo helay markiisa ugu horeysay
2 Safarkiisa labaad
3 Safarkii sadaxaad
4 Linkiga Caddaynta
Dhulka oo helay markiisa ugu horeysayEdit
sanadka marka oo ahaa 1478kii, karistofer wuxuu tagay wadanka Boortuqaal, isla markaas neh wuxuu dhinaca galbeed ka raadinaayay, jidka tago wadanka Hindiya ee dhinaca badda. Kristoffer waxaa caawiyay dad ka mid ah boqortooyada Bortuqiiska, isla markaas neh waxay ku heshiiyeen haddii uu dhul helo in ee ayaga lacag ka helaayaan dhulkaas. Sanadka marka uu ahaa Agoosto 1492 ayaa waxaa bilaawday safarkoodii, 3 maraakiib ah oo saaran 90 qof ayaa u safartay dhinaca galbeedka ee badweynta atlaantik, kadib waxay tageen Ameerika, iyaga oo rabay in ay tagaan hindiya. Isla sanadkii Waxay tageen Meel jasiirad ah, wuxuuna helay wadanka Kuuba, hal markab ayuu uga tegay meesha, marka ee dhacday in ee dadka saarnaa markabkaas in ee raadiyaan Dahab. sanadka marka oo ahaa 1493dii Kristoffer dib oo u soo noqday, asiga oo 8 indian ah soo afduubtay.
sanadka marka oo ahaa 1493, karistoffer wuxuu ka safray magaalo ku taalo dalka Spania, oo la dhoho Kadis, markaan wuxuu kaxeestay 17 maraakiib iyo dad gaaraayo 1200 oo qof. Isla sanadkii waxee heleen, jasiirado ka mid ah qaarada ameerika oo ku wareegsan wadanka Dominika, markaas neh 46 jasiiradoo oo hal hal jeer booqday inta oo tegin jasiirada ween ee Hispaniola, meesha oo safarkiisa hore uuga tagay dadkii la safraayay, qaar ayaga ka mid ah wee dhinteen, marka ee isbaanishka si xun ula dhaqmeen dadkii dariskooda ahaa. Kristoffer lacag oo bixiyay ka bixiyay dib udhiska hispaniola. Maraakiibta kristoffer waxee u sii safreen wadanka Kuuba sanadka marka oo ahaa 1494ii. Kristoffer wuxuu cilimi baaris ku haayay, Jasiirada Kuuba iyo Jamayka. isla sanadkii agoosto, kristoffer dib oo u soo laabtay asiga iyo dadkiisa, ayaga oo watto dad 100 kabadan oo adoon ah. Dadka adoonsiga lagu soo watay, badanaa tahriibka kuma noolaanin, Marka oo markabka soo galay wadanka spania neh, boqorta isbanishka makala jecleen adoomaha, isla markaas neh qaar aa la sii daayay. Kristoffer wuxuu rabyay, in oo lacag badan ka helo adoomada, sababtoo ah wax dahab ah masoo helin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristoffer_Kolombus&oldid=210813"
Last edited on 11 Abriil 2021, at 19:58
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Abriil 2021, marka ee eheed 19:58.